Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi UBO oo fadalweyn dhigay kadib marki la ceydhsaday wadoyinka Melbourne Australia
Cabdi UBO oo fadalweyn dhigay kadib marki la ceydhsaday wadoyinka Melbourne Australia
Maanta oo shirkii larabay Cabdi UBO inu kahadlo albaabada loolaabay isagana dad gadoodsan oo eryanaya suuqa dhexdiisa ay Poliska ka reebeen iyo gaadhigi lagu qaadi lahaa oo lagugudbay gaadhi kale lana burburiyay. Poliska magalada Melbourne oo u xaqijiyay Jaaliyada Ogadeniya in wax shir ah ka dhaceyn goobtaas: Balse waxa lashegaya in meel qol ah ay rabaan inay sawiro isaga qaadaan cabdi UBO iyo dhowrqof oo dabadhilif ah. Hoos ka aqri warbixintan oo faahfaahsan
Waxaa maalmahan ku sugnaa Australia rag ka socday gumaysiga oo ay ka mid ahaayeen kuwa soomaali ah, kuwaasoo si qarsoodi ah isugu dayayay inay u gogol xaadhaan imaatinka Cabdi Iley.
Iyagoo aysan kuwii hore waxba u qabsoomin cabsina ay ku joogeen ayay Ethiopia soo dirtay Cabdi Iley iyo rag kale oo Ethiopian ah kuwaasoo shalay subaxii kasoo dagay magaalada Melbourne.
Dad u badan reer Puntland iyo kuwashaqsiyaad ah oo tiro yar oo horey loogu yiqinay dadnimo xumo ayaa u abaabulayay shir ay ku tala gashanaayeen inay u qabtaan maanta oo axad ahayd.
Jaaliayadda oo si aad ah isugu duubnayd una diyaargarowday ayaa maanta 1:00pm heshay goobta ay ugu tala galeen shirka iyagoo qaar kalena diray ku ahaayeen huteelka uu daganaa Dabaqoodhi Iley halkaasoo ay ku heleen gaadhigii lagu qaadi lahaa oo ay ku hor gudbeen gaadhigay wateen isagiina uu dib ugu cararay huteelka.
Jaaliyadda ayaa isku wareejisay sadex kadin oo laga galayay goobta shirka ee ay ku balansanaayeen iyagoo ka horjoogsaday in cidi gasho.
Goor dambe ayay yimaadeen Cabdi Iley iyo dhawr dabaqoodhi oo la socday, hal mar ayaa lagu yaacay, waxaana u suurta gali wayday in uu galo goobtii shirka oo aan dad ku jirin.
Waxaa la sheegay in Cabdi Iley uu cagaha wax ka dayay oo la arkayay isagoo cararaya, kadibna boolisku ay ku hagoogteen oo ay ka joojiyeen dadkii ku qamaamayay.
Booliska ayaa dadkii cadhaysnaa joojiyay oo u sheegay in uusan dhacaynin wax shir ah oo ay joojiyeen amaanka dartii.
Jaaliyada Ogadeniya ee Melbourne ayaa iskasii joogtay oo ilaa hadda ku sugan goobtii mana dhicin wax shir ah oo ay qabsadeen dabaqoodhigii yimid Australia.
Waxaa kaloo jiray gacan qaadyo loo gaystay daba qoodhi dhawr ah oo qaarkood loo keenay ambulance.
Dharbaaxada dabaqoodhiga kaga dhacday Australia ayaa niyad jab wayn ku ah qorshihii gumaysigu ay ka damcsanaayeen dalkan iyagoo ay magaalooyinka kale ee wadankana ay ku sugayaan dhacdooyin kuwaa lamid ah am aka daran.
Waxaa kale oo la xaqiijiyay tigreega iyo dabaqoodhiguba ay iska eryeen dabaqoodhigii keenay wadankan oo la yidhaahdo Cumar faaruuq oo ay Ibraahin Dheere ay walaalo yihiin iyagoo ka shakiyay xidhiidh uu jaliyada laleyahay oo uu jaaliyada basaas u yahay.
Warar aan hada helayno ayaa sheegaya in ay dhawr qof meel ku balansadeen iyadoo ay xubnaha jaaliyaddu hadda kusii socdaan meesha loo malaynayo inay joogaan si ay usoo hubiyaan.
stop the Genocide in ogadenia says:
this news sounds cool wlhy and i wish to take part that protest of melbourne ina ubo in wax lagarsiyanse kajecla ishana laga turo bullshit u did nice job guys keep the freedom spirit up and we should succeed insha-Allah #freeogadenia
asc walalayaal waxaa faraxad weyn u ah umada reer ogadenya jabkiiloogeystay dabqodigii kayimid jigjiga ee wakiilka ka ah Tigrega ee u soo dirsatay Australia.Cabdi illey, Cabdi UBO, Cabdulahi Tigrere ama ethopia, iyo (dabadhoonka) maxamud shakur.cararkii ama baqihii ku dhacay wa waxayna ilaawey waligood. taa waxaab uga daran mida kale ee sugeysa ee tigreygu ciqaabtuu ku samayndoono,taasi waxay kadhigantahay waa sumaloo riyo seeg oo ido seeg oo meel dhex salqlee, waa meelaba seeg,taa waxaba kasiidaran ciqaabta sugaysa Aakhiro,iyo masaakiintii ay laayeen.
Guulaysta jaaliyadahayaga aduunka kubaahay gaar ahaan oustralia
Abdi UBO!!! Waa magacii uu bixiyay laakiin waa sax in loogu yeedhaa! Runtii Isagaa ah Ruux Bahdilan oo doqona.
also same action should happen in there u.k / u.s.a/ and rest of world… that will be sign and show how people feel and ready for freedom… if people reject ethiopia outside and inside that will be agreat wall for those who are colonizing ogaden ……everything that is happening ground is well connected from upper countries i mean abroad.. let disconnect every meeting that will be held out of ethiopia so they will paralysed.. ….. i iwsh even they miss ther life inorder to learn are lesson.. and its easy job… people weak up freedom will never come in easy way.. more people must miss for there life if we need free ogaden ….ha nolato…